SWMC WUXUU SOO BANDHIGAY BAAKJADA XAL EE BEIFANG QUARRY |
Qaab-dhismeedka caadiga ah Buldozer
Bulldozer-kaxaynta sare leh
Saldhigga Korontada Wareega
GYD80/100 Saldhigga Korontada Wareega
QUY16 wiish la dabagalay
QUY25 wiish la daba galiyay
La soco Qodista
HBXG ZG3210-9C Qodista Haydarooliga
Qodista HBXG ZG3365LC-9C
HTL120-9 giraangiraha giraangiraha
HTL150-8 Qodista wheel
SWMC-X5 Haydarooliga qodista Riigga
SWMC-T45 Buuxa Haydarooliga Sare Hammer Dusha Riig qodista
SWMC-360-DTH gurguurta kala go'ay oo ku rakiban haydarooliga hoos-u-godka godka
SWMC-370-DTH gurguurta kala go'ay oo ku rakiban haydarooliga hoos-u-godka godka
SWMC-380-DTH Qalab qodista oofwareenka ah
Qaybaha Riigga Qodista
Qaybaha u adkaysta xidhashada
Taageerada Qaybaha Hagaajinta
SWMC WUXUU SOO BANDHIGAY XIDHIIDH XAL AH EE BEIFANG QUARRY
SWMC, soo saaraha mashiinka qodista, si la mid ah bixinta mashiinada dhamaystiran macaamiisha, waxay ka dhigtaa isticmaalka in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah si ay u bixiso xalal qodid oo lagu kalsoonaan karo isticmaalayaasha mashiinnada qodista dhulka hoostiisa iyo caawinta adeegga macaamiisha si ay u gaaraan yoolalka injineernimada Qiimaha jaban iyo hufnaanta sare.Waxaa la sheegay in iskaashiga ka dhexeeya Xuanhua qodista riig saaraha SWMC iyo BEIFANG dhagaxa kuma koobna bixinta qalab.Marka BEIFANG dhagaxa ahaa baahida degdega ah ee alaabta, SWMC waxay sidoo kale bixisay adeegga kiraynta ee X5A-DTH. Dhagaxa BEIFANG uma baahna in ay maal galiyaan lacag badan, taas oo badbaadisay kharashkii wax soo saarka hoosna u dhigay khatarta wax soo saarka
SWMC waxay siinaysaa tignoolajiyada qodista BEIFANG Quarry, oo ku taal magaalada Chaoyang, gobolka Liaoning, si ay uga caawiso horumarinta hufnaanta qaraxa.
Tuff laga helay dhagaxa BEIFANG ayaa ah dhagaxa ciid ee ugu tayada sarreeya
Waxaan qiyaasi karnaa in haddii aan qodno god leh qoto dheer oo ah 22m iyo dhexroorka 115mm ee dubbaha, waxaa jiri doona rabitaan muuqda iyo waxtarka qodista ayaa hoos u dhici doona. Sidaa darteed, BEIFANG qurry waxay soo iibsatay 2 qaybood oo ah SWMC X5A-DTH oo buuxa biyo hoostiisa. mishiinka ay soo saartay SWMC. Waxay la shaqayn kartaa impellers submersible cadaadis-sare, iyo cadaadiska shaqadu waa ilaa 21bar.
Engegnaanta dhagaxu waa engegnaanta dhexdhexaadka ah F = 8-10. Ka dib tijaabooyin isdaba joog ah oo lagu sameeyay dhagaxa dhagaxa, waxaa la go'aamiyay in la qaato habka daloolka u janjeera ee leh dalool 140mm ah iyo xagal 30 darajo ka soo jeeda jihada toosan. Sidan oo kale, xasiloonida tillaabada ayaa ka sii fiicnaan karta, xariiqda iska caabintu waxay noqon kartaa mid isku mid ah, iyo inta badan boqolkiiba iyo hadhaaga waa la dhimi karaa.
X5A-DTH oo ay soo saartay Taiye, oo ah soo saaraha qodista qodista ee Xuanhua, ayaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo waxtarka.BEIFANG waxay dooratay laydhkan sababtoo ah waxay si sax ah u xakameyn kartaa xagasha qodista, nadiifinta daloolka iyo nadiifinta derbiga daloolka, dalool qoto dheer oo si degdeg ah u qodaya.
Dhagaxa BEIFANG wuxuu soo bandhigay shuruudo gaar ah oo ku saabsan hufnaanta wax soo saarka. Waxaan inta badan nidhaahnaa, "sida wanaagsan ee tayada samaynta daloolka, si fiican u qarxinta, iyo dabcan, natiijada ka sii fiican. Si kale haddii loo dhigo, yaraynta qadarka qarxinta labaad waxay sii kordhin kartaa wax soo saarka.
Qalabka qodista X5A-DTH waa hawl madaxbannaan oo gebi ahaanba ka madax bannaan qalabka, oo lagu qalabeeyay isticmaalka cadaadiska hawada sare DTH saamaynta qodista gawaarida hawada kombaresarada, bixinta BEIFANG quarry waa 2 mashiin gebi ahaanba caadi ah, sababtoo ah waxay noqonayaan godad u janjeera, sidaas darteed u baahan naqshad gaar ah oo caag ah. daboolka boodhka, sidoo kale sababta oo ah dhagaxa adag, daloolku wuxuu u baahan yahay Settings cabbir gaar ah.
Tusaale ahaan, qaab-dhismeedka juqraafiyeed ee dhagaxa dhagaxa wuxuu u baahan yahay in la doorto xoogaa degdeg ah oo leh ilig tiir ah ama isku dar ah ilig tiir iyo ilko guga. Dusha hoose waxay sababi kartaa in godadka ay ku fashilmaan inay sameeyaan, ama xadhigga daloolku uu ku dhego daloolka, ama cadaadisku hoos u dhaco.
Marka la eego waxtarka wax-soo-saarka, godadka 22 mitir qoto dheer, wakhtiga qodista ayaa laga dhimay 1 dalool 45 daqiiqo celcelis ahaan 1 dalool 30 daqiiqo.
Waqtiga boostada: Agoosto-28-2020
Cinwaanka: Yard No.172, Shengtai Road, Xuanhua, Zhangjiakou, Gobolka Hebei, Shiinaha
Fakis :+86 313 3865588
Qalabka qodista Xuanhua wuxuu sameeyay guul kale oo cajiib ah - 50 unug SWMC 360 qodista RIGS waxay isticmaaleen in ka badan 1,800 tan oo walxaha qarxa in ka yar hal bil, in ka badan laba jeer isticmaalka shaqada maalinlaha ah. Tianchen Qix...
Miinada Fengshan, oo ku taal degmada Changping, Beijing, waa saldhigga sahayda alaabta ceeriin ee Beijing Cement Works Co., Ltd., oo lagu qiimeeyay "Utubka Tijaabada Miinada Cagaaran ee Qaranka" Wasaaradda ...
SWMC 370 riig qodista dhulka hoostiisa ayaa si guul leh u dhamaystiray mashruuca gundhigga u ah mashruuca hantida ma-guurtada ah ee Guangzhou, Shiinaha. Mashruuca dhismaha guryaha ee Guangzhou wuxuu daboolayaa dhul dhan 62,000 m2, kaas oo 44,000 m2 i...
Iyada oo ay sii kordhayso yaraanta tamarta dhaqameed, horumarinta iyo ka faa'iidaysiga tamarta cusub ayaa soo jiidatay indhaha dhammaan dalalka adduunka. Isla markaana, tamarta cusub ee sawir-qaadista ee Shiinaha waa ...
Sebtembar-Xilliga deyrta ayaa soo socda, xilli goyn leh midho qani ah iyo faafin caraf! Cagaf-cagaf-dhisidda shaqada adag ee shaqaalaha HBXG ee mashruuca batroolka Ruushka ee ay ku guulaysatay HBXG ayaa lagu guulaystay...
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.
Xisaabaadka Rasmiga ah